I-Fibromyalgia | Ingcebiso-oonobangela -IMiqondiso-Unyango-Unyango kunye nokuzivocavoca
I-Fibromyalgia yimeko yonyango ebonakaliswa kukunganyamezeleki, ukubanda kwentlungu kunye nokunyuka kokuziva koxinzelelo kulusu kunye nezihlunu. I-Fibromyalgia yimeko yokusebenza kakhulu. Yinto eqhelekileyo kakhulu emntwini ukuba uphethwe kukungakhathali, iingxaki zokulala neengxaki zememori.
Iimpawu zinokwahluka kakhulu, kodwa iimpawu ezibonakalayo zintlungu ebalulekileyo kunye nentlungu etshayo kwiimisipha, izihlanganisi zemisipha kunye nokujikeleza amalungu. Ihlelwe njengenye Ukuphazamiseka kwemithambo ethambileyo.
Imbangela ye-fibromyalgia ayaziwa, kodwa uphando lwakutshanje luye lwacacisa ukuba inokuba yi-epigenetics kunye nohlobo olubangela ukungasebenzi kakuhle kwingqondo. Kuqikelelwa ukuba ubuninzi be-100000 okanye nangaphezulu bachaphazeleka yi-fibromyalgia eNorway - ngokwamanani oMbutho waseNorway Fibromyalgia.
Skrolela ezantsi kwinqaku Ukubukela ividiyo yoqeqesho elungiselelwe kunye ne-fibromyalgia.
Ugxininiso ngakumbi kufuneka lubekwe kuphando olujolise kwimeko echaphazela abaninzi -Kungenxa yoko le nto sikhuthaza ukuba wabelane ngeli nqaku kwimidiya yoluntu, ngokungcono ngokusebenzisa iphepha lethu le-Facebook kwaye uthi: "Ewe kuphando oluthe kratya kwi-fibromyalgia". Ngale ndlela umntu unokwenza ukuba 'isifo esingabonakaliyo' sibonakale ngakumbi.
Funda: - Imithambo emi-6 yalabo abanesifo seFibromyalgia
Abachaphazelekayo? Joyina iqela le-Facebook «I-Rheumatism - INorway: Uphando kunye neendaba»Uhlaziyo lwamva nje olwenziwe kuphando kunye nokubhala kumajelo eendaba malunga nale ngxaki. Apha, amalungu anokufumana uncedo kunye nenkxaso-ngalo lonke ixesha lemini- ngokutshintshana ngamava abo neengcebiso.
I-Fibromyalgia ivela kwiLatin. Apho i-'fibro 'inokuguqulelwa ngezicubu zomzimba (izicwili ezinxibelelanayo) kunye ne' myalgia 'ezinokuguqulelwa ngentlungu yemisipha. Inkcazo ye-fibromyalgia ke iba 'izihlunu kunye nezihlunu zentlungu'.
Ngubani ochatshazelwa yi-fibromyalgia?
I-Fibromyalgia ihlala ichaphazela abasetyhini. Kukho umyinge we-7: 1 phakathi kwabasetyhini abachaphazelekayo kunye namadoda-ethetha ukuba amaxesha asixhenxe amaninzi asetyhini achaphazeleka njengamadoda.
Yintoni ebangela i-fibromyalgia?
Okwangoku awuyazi eyona nto ibangelwa yi-fibromyalgia, kodwa uneqela leenkcazo kunye nezizathu ezinokubakho.
Genetics / epigenetics: Izifundo zinike ubungqina bokuba i-fibromyalgia ihlala iqhubeka kwiintsapho / kwiintsapho kwaye kuye kwabonwa ukuba iimpembelelo zangaphandle ezinje ngoxinzelelo, umothuko kunye nosulelo kunokubangela ukufunyanwa kwesifo i-fibromyalgia.
- Ngaba impendulo kwi-fibromyalgia iyimfihlakalo kwiijeni zethu?
Ukonzakala / ukwenzakala / ukosuleleka: Kukho ukuphikiswa ukuba i-fibromyalgia inokuba kunye nokuhambelana kwendlela ezithile okanye isifo. Intlungu yentloko, uArnold-Chiari, isibeleko somlomo wesibeleko, umqala, umhlaza, isifo sokuphefumla, isifo se-Epstein Barr kunye nosulelo lomgudu wokuphefumla.
Funda: -I-Fibromyalgia inokubangelwa kukungaziphathi kakuhle kwiBongo
Zeziphi iimpawu eziqhelekileyo zefibromyalgia?
Intlungu ebalulekileyo kunye neempawu ezifana nokuqina kwemisipha, ukudinwa / ukudinwa, ukulala kakubi, ukungabi namandla, isiyezi, intloko ebuhlungu kunye nesisu esibuhlungu.
Njengoko sele kukhankanyiwe, kuye kwakho iingxelo zokuba abantu abachaphazeleka yi-fibromyalgia bahlala benengxaki yeememori, ukungaphumli umlenze, ukuva imisindo kunye nokukhanya, kunye nezinye iimpawu ze-neurological. Ukuchonga kusoloko kunxulunyaniswa nokudakumba, uxinzelelo kunye noxinzelelo lwasemva koxinzelelo.
Njani ukufunyanwa kwesifo i-fibromyalgia?
Ngaphambili, ukuxilongwa kwakusenziwa ngokuvavanya amanqaku ali-18 emzimbeni, kodwa le ndlela yokufumanisa isifo sele ilahliwe. Kwisiseko sokuba akukho luvavanyo lokuqonda, luhlala lusekwe ngaphandle kolunye unyango kwaye lusekwe kwiimpawu iimpawu / iimpawu zeklinikhi.
Ukuxilonga kumanqaku abuhlungu emzimbeni?
Uphando lwamva nje, olupapashwe kwiJenali ye-Clinical Rheumatology (Katz okqhubekayo, 2007), iyayikhaba ithiyori yamanqaku abuhlungu njengemeko yokuqonda isifo, njengoko begqibe kwelokuba uninzi lwabantu nalo luba buhlungu kula manqaku. Kuyakholelwa nokuba uninzi lokuchaza kakubi Ubuhlungu obukhulu be-myofascial njengefibromyalgia.
Unyango lwe-fibromyalgia luyinkimbinkimbi kakhulu. Kungenxa yokuba imeko iyahluka phakathi kwabantu kwaye ihlala inxulunyaniswa nenani lezinye iimeko. Unyango lunokubandakanya amayeza, utshintsho kwindlela yokuphila, unyango lomzimba kunye nonyango lwengqondo-rhoqo kwindlela eyahlukeneyo.
Abanye abantu bafumana ukuphuculwa kweempawu zabo ze-fibromyalgia ngokwenza utshintsho kwindlela abatya ngayo. Oku kunokubandakanya ukuyeka, umzekelo, utywala, iimveliso zobisi kunye / okanye i-gluten.
Kuyingenelo kakhulu kumntu onesifo i-fibromyalgia kwaye afumane uncedo lokufumanisa ukuba yeyiphi na imithambo elungele bona. Unyanga ngokwasemzimbeni unokunyanga iintlungu, izihlunu eziqinileyo.
Unyango lweChiropractic kunye nonyango oludibeneyo
Ukudibana kunye nonyango lomzimba kunokudambisa umsipha kunye nentlungu edibeneyo. I-chiropractor yale mihla iphatha izihlunu kunye nokudibana, kwaye nayo, njengonxibelelwano oluphambili, inceda nakuphi na ukuthunyelwa okanye okufanayo.
Ukuqinisekiswa kwefuthe lokumodareyitha kwiimpawu ze-fibromyalgia. Iziphumo zincinci ukuba ngaba kuphela unyango olusengqondweni lusetyenziswa lodwa, kodwa ngesiphumo esikhulu ngakumbi xa sidityaniswa nolunye unyango.
Ukuthambisa kunye nonyango lomzimba
Ukusebenza kwemisipha kunye nokuthamba kunokuba nefuthe lokuncitshiswa kweempawu kwimisipha eqinileyo kunye neqaqambileyo. Yonyusa ukujikeleza kwegazi kwiindawo ezibuhlungu zalapha ekhaya kwaye inyibilike ibe yimicu yemisipha exineneyo- inokunceda ekususeni ukubetha kunye nezinye.
Unyango lwenaliti / i-acupuncture
Unyango lwe-Acupuncture kunye nonyango lwenaliti lubonise iimpembelelo ezilungileyo kunyango kunye nentlungu ngenxa ye-fibromyalgia.
Indlela efanelekileyo yokuphefumla kwaye imithambo yokuphefumla Yeyiphi enokunciphisa uxinzelelo kunye noxinzelelo kunokunceda ukunciphisa iimpawu.
Ukuzivocavoca / umthambo kwabo bane-fibromyalgia
Umthambo oguqulweyo kunye nokuzivocavoca kunokuphucula isimo somntu kunye nokulala. Idibene nokuncipha kwentlungu kunye nokukhathala. Izifundo zibonise ukuba uqeqesho lwentliziyo kunye nokuzivocavoca umzimba lubonakala lusebenza kakhulu kwabo bachatshazelwe yi-fibromyalgia. Apha ngezantsi kukho umzekelo wenkqubo yoqeqesho:
Apha ubona iindlela ezintlanu zokuzilolonga ezihamba apha naphaya ezinesifo se-fibromyalgia. Oku kunokukunceda ukunciphisa iintlungu zemisipha kunye nokuqina kwamalungu. Cofa apha ngezantsi ukuze ubabone.
Joyina usapho lwethu kwaye ubhalise Kwitshaneli yethu (Cofa apha) - kwaye ulandele iphepha lethu kwi-FB mihla le, iingcebiso zezempilo simahla kunye neenkqubo zokuzilolonga ezinokukunceda ukuba ube sempilweni engcono.
Amanzi ashushu / uqeqesho echibini
Uqeqesho lwamanzi ashushu / echibini libonisile ukuba inokusebenza kakhulu xa kuziwa ekukhululeni kweempawu kunye nokuphuculwa kokusebenza - oku ngakumbi kuba idibanisa uqeqesho lwe-cardio kunye noqeqesho lokumelana.
Funda: -Imithambo yokuphefumla enzulu e-3 yokulwa noxinzelelo
Ndingayigcina njani i-fibromyalgia e-bay?
-Phila ngokusempilweni kwaye wenze umthambo rhoqo (ngokomda wakho)
-Funa impilo-ntle kwaye uphephe uxinzelelo kubomi bemihla ngemihla
-Hlala ukwimo entle yomzimba kunye Iinkqubo zokuzilolonga ezihlengahlengisiweyo zalabo abane-fibromyalgia
- I-LDN (Idosi ephantsi ye-naltroxen)
Lo mfanekiso uqokelelwe nguCureOkonke kwaye ubonisa imbonakalo yonyango kunye nokuchazwa kwazo ngokufanelekileyo xa kunyangwa i-fibromyalgia. Njengoko sibona, amanqaku e-LDN aphezulu kakhulu.
Funda ngakumbi: Iindlela ezisi-7 ze-LDN zinokukunceda ngokuchasene neFibromyalgia
Nantsi indlela onokuyinceda ngayo ukulwa nentlungu engapheliyo kwaye uyixhase:
Inketho A: Yabelana ngokuthe ngqo kwi-FB - Khuphela idilesi yewebhusayithi kwaye uyincamathisele kwiphepha lakho le-facebook okanye kwiqela le-facebook elifanelekileyo olilungu lalo. Okanye, cofa iqhosha u "share" elingezantsi ukuze wabelane ngesithuba ngakumbi kwi-facebook yakho.
Chukumisa oku ukuba wabelane ngakumbi. Enkosi enkulu kuye wonke umntu oncedayo ukukhuthaza ukuqonda okwandileyo kwe-fibromyalgia kunye nonyango olungapheliyo!
Inketho B: Nxibelelanisa ngokuthe ngqo nenqaku kwibhlog yakho okanye kwiwebhusayithi.
IPHEPHA ELANDELAYO: -Amanqaku ama-18 obuhlungu obuhlungu anokuthi uxele ukuba unayo i-Fibromyalgia
Cofa apha ngasentla ukuze uqhubeke kwiphepha elilandelayo.
URobert S. Katz, MD, kunye noJoel A. Block, MD. I-Fibromyalgia: Uhlaziyo kwiindlela kunye noLawulo. Ijenali yonyango lweRheumatology: Umqulu 13 (2) Epreli 2007pp 102-109
Imifanekiso: I-Creative Commons engu-2.0, iWikimedia, iWikiFoundry
Imibuzo ebuzwa rhoqo ngeFibromyalgia:
Zive ukhululekile ukusebenzisa ibhokisi yezimvo engezantsi ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye izimvo.
(Sizama ukuphendula yonke imiyalezo kunye nemibuzo kwisithuba seeyure ezingama-24 ukuya kwezingama-48. Sinokukunceda nokutolika iimpendulo zeMRI kunye nezinye. Ngaphandle koko, zive ukhululekile ukumema abahlobo kunye nosapho ukuba bathande iphepha lethu likaFacebook - elihlaziywa rhoqo ngengcebiso yezempilo elungileyo, umthambo kunye neenkcazo zokufumanisa isifo.)
Ngaba kukho nabani na oye waphanda ukuba kutheni abafazi abaninzi abakhulelweyo besithi iimpawu ze-Fibromyalgia ziphantse zaphela xa bekhulelwe kunye nexesha emva kokuba incanciswe ngokupheleleyo? Ndingathanda ukuba neenyanga ezi-5 ndikhulelwe unyaka wonke..
Hilde Teigen uthi:
Ndaphinda ndadibana nale nto ngexesha lokukhulelwa. Ndingathanda ukukhulelwa umphelo ☺️
Molo Elsa. Impendulo kade kade, kodwa ihomoni esiyivelisayo thina basetyhini ngexesha lokukhulelwa ithomalalisa iintlungu. Ndaya kwi-hormone ye-hcg kwiminyaka embalwa edlulileyo kwaye ndafumana ukukhululeka kweentlungu kunye nokwandisa amandla. Kwilizwe langaphandle, uphando lwenziwe kwi-hcg njengento yokulungisa intlungu, kodwa oku akuyona into esetyenziswa eNorway.
Molo ukhathazwa yi-fibromyalgia, i-metabolism ephantsi kunye ne-endometriosis, ngaba kukho unxibelelwano phakathi kwezi zintathu? Ndineprolapse kumqolo ongezantsi, ndiyifumene kanye emva kokuba ndisuse i-tailbone. Ndisokole iminyaka emininzi nge-lumbago kwaye ndiziva ngathi ukuzilolonga phantse kundenza ndibe nexhala kuba ndiqaqanjelwa emva koko.
Iifoto zikaMnumzana ezithathwe kwiminyaka emininzi eyadlulayo zibonise ukunxitywa ezihlahleni nasezinqeni. I-chiropractor yam kunye ne-acupuncturist yam baye bacotha amaxesha amaninzi ukuba bakrokrela ukuba ndine-hernia, kodwa ayizange ichaphazele uvavanyo endiluthathe kwiminyaka embalwa edlulileyo-ucinga ukuba ndingafuna ntoni kwiimviwo? Kunzima ukonwabela ubomi ngentlungu engaka yemihla ngemihla.
Ukuya kuthi ga kwi-30% yalabo abanemetabolism ephantsi nabo bafunyaniswa bene-fibromyalgia - ngoko kukho unxibelelwano oluthile, kodwa olu xhulumaniso alukaqondwa kakuhle okwangoku.
1) Ubhala ukuba ususwe umsila?! Utsho kanjani?
2) Ufumene nini i-low back prolapse? Ingaba irhoxile ukusukela ekuqaleni?
3) Ngaba ukhe wazama uqeqesho lwesiko? Isibakala sokuba buhlungu izihlunu luphawu nje ukuba izihlunu azinamandla ngokwaneleyo umthwalo - kwaye ke xa ume kwaye uhambe kubomi bemihla ngemihla, nawe ufumana intlungu ngenxa yale (kubandakanywa lumbago). Ekuphela kwendlela yokuphepha iintlungu ezisezantsi kukuba izihlunu zenkxaso zomelele kunomthwalo - ke apha kufuneka ufumane iindlela zokuzilolonga ezilungelelanisiweyo ukuze womelele ngokuthe ngcembe. Qala ngoxinzelelo oluphantsi kwaye ujonge phezulu. Kuya kuthatha iinyanga ezininzi phambi kokuba ukwazi ukuzakhela kwinqanaba elilungileyo ngokwaneleyo.
Nceda ubhale iinombolo zeempendulo zakho. Enkosi kwangaphambili.
UNicolay v / vondt.net
Ellen-Marie Holgersen uthi:
Ngaba uphando lwabantu abane-fibromyalgia lusebenza nakubantu abane-syndrome ye-muscle engapheliyo? Emva koko ndiyathetha uphando olubonisa iimpazamo zokudibanisa kwingqondo kwiintlungu ezibangelwa yintlungu kwizigulane ze-fibromyalgia.
UNicole v / vondt.net uthi:
Olu phononongo aluthethi nto ngalo - ke ngelishwa asazi.
UNicole v / Vondt.net
Bente M uthi:
Hi ndadibana nayo ngoku. Ndinombuzo okhathaza abaninzi. Kutheni sizilibala izinto… inkumbulo yexesha elifutshane .. baninzi abasokolayo ngayo. Kutheni siwalibala amagama? kutheni singajongwa ebuchotsheni okanye ngasemva? Kufuneka iboniswe kwenye indawo. Umama ubene-Fibro iminyaka emininzi kwaye unengxaki yenkumbulo ngoku bamthathele uvavanyo lwe-spinal cord. Emva koko ndiyazibuza ukuba bonke abo baneFibromyalgia banento efanayo. Ndiyasoyika esi sifo.
Ewe, ndinayo kwaye nomama wam ona-86 unayo. Kuyacaphukisa ngamanye amaxesha, kodwa ngokuhlekisa okuncinci kuhamba kakuhle. 😉
Uxinzelelo / uxinzelelo lwe-oxidative, ukudumba okungapheliyo kunye nomgangatho ophantsi wokulala kunokuchaphazela kakubi ingqondo. Xa kuziwa ekulaleni, umntu unokulala ubusuku bonke, kodwa akanako ukulala okunzulu okubalulekileyo kwimemori kunye nokugxila.
Konke oku kuyinyaniso. Ndikhe ndaya kwiqela lephysiotherapist kwaye akukho mntu ufuna ukwenza iimassage ezinokukhulula izihlunu zam eziqinileyo. Baza kubonelela ngolwazi ngoqeqesho kuphela.
Mholo. Andazi ncam ukuba ndingawubuza phi lo mbuzo- ke ndizama apha. Usebenza kwi-kindergarten kwaye uye waba nentamo ebuhlungu malunga ne-1 unyaka. Yaqala ngesifo sekristale (utshilo ugqirha - i-chiropractor yathi ivela entanyeni). Ngoku bendikwikhefu lokugula ukusukela ekupheleni kukaJanuwari. Waya kwi-chiropractor, kodwa waziva ngathi incede kakhulu apho kwaye emva koko-ngoku iya kwi-physio. Ndiye ndaya kwiMRI nakwiX-reyi. Isiphumo saba: Ukunyuka kwe-disc degeneration kumanqanaba e-C5 / C6 kunye ne-C6 / C7, yongeza i-Modic uhlobo lwe-1 i-cover plate reaction reaction ukuya ngakwesobunxele kunye nokunyuka kancinci kwe-disc flexion kunye neediphozithi ezinkulu ze-uncovertebral ezinika i-foramen stenoses ecacileyo kwi-C6 kunye ne-C7 ekhohlo. ingcambu. Akukho stenosis yomgogodla okanye i-myelomalasia. Yongeza ukuba ndinentlungu eninzi entloko. (Kwaye ke ubukhulu becala malunga nokubetha ngokufanelekileyo xa ndishukuma kwaye ndihamba). Ebekwiphysio izolo. Akazange athethe kakhulu malunga nesiphumo, kodwa wathi kufuneka ndolule intamo yam kancinci kwaye ndiqhubeke nokubaleka (ohamba kakuhle kakhulu). Uye wathi i-Modic ibonakalisiwe, kodwa ukuba abaphandi abavumelani malunga nokuba basebenzise okanye bangasebenzisi i-antibiotics. Into endiyibuzayo kukuba i-Modic - ndifunde kancinci malunga nayo xa ifika kwi-lumbar spine - iyafana nentamo? Qaphela ukuba abanye abantu abandingqongileyo abacingi ncam ukuba ndinentamo ebuhlungu kwaye mhlawumbi kufuneka ndenze okungakumbi. Ndineentsuku ezimnandi, kodwa kuthatha kancinci kakhulu ngaphambi kokuba ndibe buhlungu kwakhona. Ngaba uhlobo lwe-Modic 1 yinto enokulahleka? Ndiyoyika ukuhlala ndikwikhefu lokugula ixesha elide.